10 fahasamihafana eo amin'ny marketing mahazatra sy haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Talata, Oktobra 15, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Amin'ny bilaogy marketing, Robert Weller dia namintina ny 10 fahasamihafana lehibe eo amin'ny marketing mahazatra sy ny media sosialy amin'ny bokin'i Thomas Schenke Marketing amin'ny haino aman-jery sosialy und Recht in this Sary torohay.
Ny lisitra dia feno, manome ny tombony amin'ny hafainganana, firafitra, faharetana, sehatra, ara-dalàna, fitarihana ary fananana mifampiresaka. Betsaka ireo talen'ny varotra nentim-paharazana miasa ao amin'ny orinasa amin'izao fotoana izao izay mbola tsy mahalala ny fahasamihafana na tsy mahatakatra ny tombony - antenaina fa ity infografika ity dia manampy amin'ny famaritana ireo lafiny lehibe.
Tags: marketing mahazatraSary torohayrobert wellerhaino aman-jery sosialy vita tsaramedia sosialy und rechtthomas schenketoushennetoushenne.de
Marketing amin'ny atiny ho an'ny trano sy tany
Oct 16, 2013 amin'ny 8: 58 AM
aloha dia misaotra betsaka anao nizara ny infografiko dia faly aho fa nahasoa anao io!
Faharoa, nanavao azy fotsiny aho mba hahasarika kokoa azy. Miala tsiny fa manahirana be ianao 😉 Hahita ny kinova 2 amin'ny bilaogiko ianao (rohy mitovy amin'ny nampiasanao ny lahatsoratrao).
16 Okt 2013 amin'ny 1:41 PM
Izy E! Nohavaozina - misaotra betsaka Robert.
16 Okt 2013 amin'ny 4:28 PM
6 Nov 2013 amin'ny 3:04 maraina
10 Fahasamihafana eo amin'ny Marketing mahazatra sy haino aman-jery sosialy- ity dia lahatsoratra tsara tokoa. Indraindray izahay dia mitady ny fahasamihafana eo amin'ny marketing mahazatra sy ny haino aman-jery sosialy, ary eto aho no nahazo ny valiny. Misaotra
Jan 11, 2016 ao amin'ny 8: 34 AM
Fampahalalana tena ilaina… (miaraka amin'ny referansa ofc) no ampiasaiko amin'ny famelabelarako. Misaotra indrindra!
28 Nov 2016 tamin'ny 10:11 PM
Fampitahana tena mahaliana momba ny marketing mahazatra sy ny marketing nomerika. Amin'ny alàlan'ny Internet, afaka mampiasa teti-bola ambany kokoa isika ary hahazo valiny mitovy. Misaotra ny fizarana.